"घोडा सँगको ‘सेक्स’का कारण ज्यान गुमाएकी थिइन् यी माहारानीले" - Jhapa Bulentin
“घोडा सँगको ‘सेक्स’का कारण ज्यान गुमाएकी थिइन् यी माहारानीले”
झापा बुलेटिन, ३० जेष्ठ १६:३२ प्रकाशित
एजेन्सी । विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने यस्ता कैयौ राज परिवार छन् । जसको कहानी सुनेर आज पनि हामी गर्व भन्दा पनि अचम्ममा पर्ने गर्छौ । त्यस्ता राज परिवारका सदश्यहरु जो आफ्नो ताकतका कारण लागि प्रसिद्ध थिए भने कोही आफुले निर्माण गरेका भवनहरु तथा राज्यका बिस्तारका लागि ।
तर, यहाँ यस्तो राज परिवारको सदश्यको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिदै छौ जुन कुरा सुन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । तपाई आफुप्रति प्रतिप्रश्न गर्न थाल्नु हुनेछ कि के साच्चै पनि यस्तो भएकै होला त ?
सेक्सका कारण निधन त्यो पनि एक प्रशिद्ध महारानीको ! त्यसो त रुसकी महारानी केथरिन दि ग्रेट द्धितिय यौनको लागि भोकी महारानीको रुपमा चिनिन्छन् । जस्लाई सन् १७२९ देखि १७९६ सम्म यौनको भोकी रहेकी माहारानीको रुपमा पनि चित्रण गरिने गरेको पाईन्छ ।
उनले आफ्नो यौन प्यास मेटाउन कुनै दोस्रो सहपाटीको साथमा नभएर आफ्नै राजशी शान–मानको लागि पालेको घोडासंगको शारिरिक सम्पर्कले ज्या न गुमाएकी थिईन। स्रोतका अनुसार उनी आफ्ना श्रीमानसंगको यौन असुन्तुष्टिका कारण आफ्नो पतिसँग टाढिएर बस्न थालेकी थिइन् ।
उनले आफ्नो यौन सुन्तुष्टि मेटाउन महलभरि पुरुषहरु राखेकी थिइन् । समस्या यस्तो सम्म थियो कि उनी आफ्नो गोप्यभन्दा पनि गोप्य कामका लागि पुरुषहरुको प्रयोग गर्ने गर्थिन् ।
‘केथरिन द ग्रेट’ – लव सेक्स एण्ड पावरमा यस कुराको बयान गरिएको छ । बैवाहिक जिवनको ८ वर्षसम्म पनि पतिबाट सन्तान सुख प्राप्त नभएपछि उनीले आफ्ना सेनापतिसँग शारिरिक सम्वन्ध राखेको जनाईएको छ। सेनापतिसंगको सहवास पछि भने उनलाई सन्तान सुख प्राप्त भएको थियो ।
रातमा व्याचलर पार्टी गर्न रुचाउने उनि आफ्ना नोकरहरुसँग पनि शारिरिक सम्बन्ध राख्ने गर्थिन् । यी रानीले आफ्नो लागि एक विशेष सैलुन बनाएकी थिइन् जुन सैलुनमा विभिन्न आसनमा रहेका सेक्स गरेको सामानहरु राखिएको थियो । तर, रानीको निधनबारे हालसम्म कुनै त्यस्तो ठुलो खुलासा भने भएको छैन ।
त्यसकारण पनि ति रुसकी महारानी केथरिन दि ग्रेट द्धितियको यौनका लागि मरिमेट्ने महिलाको रुपमा आज उत्तिकै चर्चीत मानिन्छिन् । रुसको एउटा म्युजियममा राखिएको उनको सैलुनमा रहेको सामानहरुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ ।
“बाख्रा पालन कसरी गरिने सजिलो उपाय”
“सांसद काजीमान कागतेद्वारा, इलामका पत्रकारहरुलाई वितरण गरेँ सर्जिकल माक्स र सेनिटाइजर”